Katrina Kaif oo ka hadashay haddii si qorsheysan ay ula shaqeysay Seddaxda Khans & War wanaagsan oo usoo yeeray | Filimside.net
Home » Bollywood News » Katrina Kaif oo ka hadashay haddii si qorsheysan ay ula shaqeysay Seddaxda Khans & War wanaagsan oo usoo yeeray
Katrina Kaif ayaa ku faani karta inay sameysay wax aysan sameyn atariisho kasta oo Bollywood ah taasoo ah inay la shaqeysay seddaxda Superstar ee hogaamiyaha u ah Bollywood Town Aamir Khan, Salman Khan iyo Shah Rukh Khan ama Seddaxda Khans.
Kat ayaa filimka Tiger Zinda Hai ee 22ka bisha soo aadan ee December la daawan doono la hogaamineysa Salman Khan. Sidoo kale waxay shaashadda lasoo wadaagtay Aamir Khan iyo Shah Rukh Khan.
Iyadoo wareysi gaar ah siisay shabakadda DNA India, 34 sanno jirtaan ayaa daaha ka qaaday in aysan qorshaha ugu jirin inay gaari doonto heer ay seddaxda Khans filim la wadasameyso markii ay kusoo biirtay Bollywood.
“Ma aheyn wax ii qorsheysan. Laakiin wax walba si asal ah ayey u dheceen. Filimsameeyeyaal cajiib ah ayaa iisoo bandhigay sheeko cajiib ah aniguna waan aqbalay ka dib wadahadallo aan galnay. Sidaas darteed wax qorshe ku dhacay ma aheyn,” ayaa laga soo xigtay Katrina.
Laakiin Katrina hadda ayey biloow u tahay maxaa yeelay laba filim oo waa weyn ayey la sameyn doontaa labada Khans ee kale, Aamir Khan oo ay kula jirto mashruuca Thugs of Hindostan, halka Shah Rukh Khan ay la hogaamineyso filimka aan weli magaca loo bixin ee cillinka uu ku jilayo SRK.
Sidoo kale, warbaahinta India ayaa sheegeysa in Katrina ay dhowaan sameyn doonto filim Hollywood ah, waxaana xusid mudan inay Shahid Kapoor kala shaqeyn doonto filimka Batti Gul Meter Chalu.
Waxaa Aqrisay 683